१६ महिनामा ३ सय विदेशीलाई देश निकाला
९ मंसिर, काठमाण्डौं । गृह मन्त्रालयले १६ महिनाको अवधिमा ३ सय विदेशी नागरिकलाई नेपाल फिर्ता हुन नपाउने गरी देश निकाला गरेको छ । लागूऔषध कारोबार, जाली नोट तस्करी, चोरीडकैत, मानव ओसारपसार, अवैध कल बाइपास, सुन...बाँकी
३९ लाख सरकारी पैसा जुवामा हारेर गाविस सचिव बेपत्ता
९ मंसिर, काठमाण्डौँ । गाविसका सचिवले कति पैसा हिनामिना गर्न सक्छन् ? एक, दुई लाख वा दश लाख ? होइन, एकैपटक ३९ लाख झ्वाम पार्न सक्छन्, त्यो पनि जुवाको खालमा । डोटीका पोखरी र जिजोडामाडौं...बाँकी
मधेसीसँग प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्रस्ताव ल्याउँछु, फेल भए राजीनामा दिन्छु’
९ मंसिर, काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री एमालेले संशोधन प्रस्तावलाई सहमति दिन्न भनेर स्पष्ट पारिसक्यो । मोर्चाका केही नेताहरूले चारबुँदे प्रस्ताव नमान्ने भनिरहनुभएको छ । त्यसैले स्थिति खराब बन्दै गएको छ, वास्तवमा म धर्मसंकटमा परेको छु ।...बाँकी
साढे चार अर्ब खर्च, तर सफा भएन बागमती
मंसिर ८, २०७३ | Posted by Sansar News | पत्रपत्रिका मुख्य
८ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको बागमती नदीको पानी स्वच्छ बनाउने अभियान सुरु भएको दुई दशक बितिसकेको छ । पानी स्वच्छ बनाउन ०५२ देखि ०७२ सालसम्ममा साढे चार अर्ब खर्च भइसकेको छ । तर, पानी...बाँकी
सचिवालय सँगनै छैन मन्त्रीको तालमेल
८ मंसिर, काठमाडौं । सरकारको नेतृतव गरिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रले सम्हालेका मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवालयबीच नै तालमेल हुन नकसी सबै काम निश्प्रभावि बनेका छन् । मन्त्री आफैले नातागोता छानेर सचिवालयमा नियुक्त गरेपछि काम प्रभावित बनेको...बाँकी
४३ वषपछि फेला पर्याे लन्डनमा झलकमानको गीत
८ मंसिर, काठमाडौं । “आमाले सोध्लीन् नी खै छोरा भन्लिन्…” गीतबाट ख्याती कमाएका लोक गायक झलकमान गन्धर्वको ४३ वर्ष पुरानो एउटा नयाँ डिस्क रेर्कड गीत बेलायतको संस्कृतिविद्को घरमा फेला परेको छ । लोकगायक गन्धर्व यो...बाँकी
मोर्चाको सहमति पछिमात्र संविधान संशोधन
८ मंसिर, काठमाडौं । प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकका प्रावधानबारे मधेसी मोर्चाको सहमति प्राप्त भएपछिमात्र त्यसले संसद्मा प्रवेश पाउनुपर्ने नयाँ निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पुगेको संकेत देखिएको छ । एमालेले विरोध जनाए पनि बुधबार संसद्मा उक्त...बाँकी
मागको ८ प्रतिशतमात्र कफी उत्पादन
८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति ९एनटीआईएस० २०१६ अन्तर्गत निर्यातयोग्य उपजको सूचीमा रहेको कफी उत्पादन मागको करिब ८ प्रतिशतमात्र रहेको पाइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा वार्षिक ७ देखि ८ टन माग भएको तर...बाँकी
कर्णालीको पीडाः “कालापहाड नगए परिवार भोकै”
८ मंसिर, सुर्खेत\_जुम्ला । सेतै फुलेको केश । चाउरी परेको अनुहारमा पीडाका धर्सा प्रस्ट देखिन्थे । कमजोर शरीर भए पनि धन कमाउने आस बोकेका उनी सुर्खेत बसपार्कमा भेटिए । गाउँमा फल्ने अन्नले वर्षभरि खान नपुग्ने...बाँकी
समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था नयाँ लगानीकर्तालाई जिम्मा दिइने
८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त भएका वित्तीय संस्थालाई नयाँ लगानीकर्ताको जिम्मा लगाएर समस्याग्रस्तको सूचीबाट हटाउने भएको छ । विभिन्न समयमा राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका वित्तीय संस्थाहरूमा नयाँ लगानीकर्ताले लगानी गरिसकेको हुँदा केही...बाँकी
पेज ३७८ देखि ४४६ सम्म :« अगाडि१...३७६३७७३७८३७९३८०...४४६अर्को »